Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Navoaka ny fizahan-tany afrikanina atsinanana atsinanana
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Eo ambanin'ny sehatry ny fizahan-tany EAC isam-paritra, hampiroborobo ny fonosana fizahan-tany isan-karazany ao anatin'ny faritra ny tanjona amin'ny tanjona kendrena amin'ireo firenena dimy mpikambana ao Tanzania, Uganda, Burundi, Kenya, ary Rwanda.
Fanentanana momba ny fizahan-tany isam-paritra ho an'ny olom-pirenena Afrikana Tatsinanana.
Ny tanjon'ny fampielezan-kevitra "Visit Home" na Tembea Nyumbani dia mandrisika ny olom-pirenena Afrikana Tatsinanana hifampitsidika.
Ny hetsika dia mikendry ny hampiorina ny asan'ny fizahan-tany ao amin'ny faritra amin'ny alàlan'ny fampisehoana harena miafina fizahan-tany maro sy fonosana fialantsasatra mahaliana.
Alohan'ny fampirantiana Fizahan-tany isam-paritra voalohany nokarakarain'ny mpikambana mpikambana ao amin'ny Vondrona Afrikanina Atsinanana (EAC), natomboka ny sehatry ny fampielezan-kevitra fizahan-tany mba hampirisihana ny fivezivezena isam-paritra amin'ireo fanjakana mpikambana.
Natomboka vao haingana, ny fampielezan-kevitra "Visit Home" telo volana na Tembea Nyumbani telo volana dia mikendry ny hampirisika ny olom-pirenenan'i Afrika Atsinanana hifampitsidika eo amin'ny fanjakana mpikambana tsirairay amin'ny ezaka hampiroborobo ny asa fizahan-tany anatiny sy isam-paritra ao anatin'ny sakana EAC.
Ny fampielezan-kevitra dia mikendry ny hampiorina ny asan'ny fizahantany ao amin'ny faritra amin'ny alàlan'ny fampisehoana harena miafina fizahan-tany maro sy ireo fonosana fialan-tsasatra mora vidy sy azo zahana ao ambanin'ny fanahin'ny Afrika Magical.
Ny fampielezan-kevitra dia manome hafatra fa "Izay firenena Afrikana Atsinanana rehetra alehanao, dia Trano lavitra ny tranonao" mba hisarihana ny olom-pirenena isam-paritra hitsidika ireo toerana hita any amin'ny fanjakana mpikambana tsirairay.
Andrasana ihany koa ny fampitomboana ny fahalianan'ny mponin'ny EAC handeha ao amin'ilay faritra avy eo hamelona indray ny indostrian'ny fizahantany, izay làlan'ny ain'ny olona an-tapitrisany maro atsy Afrika Atsinanana.